IGoPro ishiya ukwenziwa nokuthengiswa kwama-drones ngokuqinisekile | Izindaba zamagajethi
U-Eder Esteban | | drones, Izaziso
Kube yimfihlo evulekile isikhathi esithile futhi ekugcineni sekuqinisekisiwe. IGoPro ivala ukuhlukaniswa kwayo kwe-drone futhi idiliza abasebenzi abangaphezu kuka-250 benkampani. Isizathu esiyinhloko esethulwe yinkampani ukuthi iyi- imakethe yokuncintisana kakhulu. Ngokwengeziwe, izindinganiso zokulawula e-United States nase-Europe zinobutha futhi zizonciphisa imakethe yenkampani eminyakeni ezayo.
Umlando wenkampani kule makethe awuzange ube nezenjabulo eziningi. Umzamo wabo wokumelana ne-DJI, umholi wemakethe awukenzekanga njengoba babecabanga. Ngalesi sizathu, inkampani iphoqeleka ukuthi yenze lesi sinqumo, ngoba Imakethe ichazwe yinkampani uqobo njengengasimami.
Ngale ndlela, I-Karma ibe idrone yokuqala neyodwa kuphela eyethulwe yiGoPro emakethe emlandweni wayo. Inkampani uqobo ikuqinisekisile ukuthi bazoqhubeka nokuthengisa umkhiqizo kuze kuphele amasheya. Ngaphandle kwalokho, futhi bazoqhubeka nokunikela ukwesekwa kubasebenzisi abayithengayo. Ngakho-ke ngalo mqondo iGoPro yenza izinto ngendlela efanele.
Ukuxoshwa kwabasebenzi abangaphezu kwama-250 ngokungangabazeki kuyisici esingesihle neze kulezi zindaba. Ngaphezu kwalokho, sekuvele kungukuxoshwa okwesine okuphawulekayo kwenkampani kusukela ngo-2016. Ngakho-ke ngalokhu kuxoshwa kokugcina i Inani labasebenzi beGoPro lizokwehla ngaphansi kwe-1.000 XNUMX emhlabeni jikelele.
Eqinisweni, abaningi bayalibuza ikusasa lenkampani. Ngakho-ke kubonakala sengathi u-2018 uzoba unyaka obalulekile kuwo. Isikhulu uqobo siphawule ukuthi kuzoba unyaka wezixazululo. Ngakho-ke, kulandela lokho izokwethula izinhlelo ezintsha ezizoguqula lesi simo.
U-2018 uthembisa ukuthi uzoba unyaka oyingqophamlando weGoPro. Inkampani iphoqelekile ukuguqula isimo uma ingafuni ukugcina inyamalale. Ngakho-ke kuzofanele sinake izinhlelo abeza nazo emasontweni noma ezinyangeni ezizayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izaziso » IGoPro iyeka ukuthengisa ama-drones futhi idiliza abasebenzi abangaphezu kwama-250
Isixwayiso semicibisholo esazamazamisa iHawaii, kungenzeka kanjani lokho?
U-Alexa, umsizi we-Amazon, uzoqala ukuzicabangela